तपाईं आत्महत्या प्रतिबद्ध यदि तपाईं स्वरî | Apg29
नर्वेजियन राजकुमारी मार्था-लुईस गरेको पूë
तपाईं आत्महत्या द्वारा स्वर्ग प्राप्त? म पहिले धेरै महत्त्वपूर्ण सत्य मा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ: यो तपाईं हामी स्वर्ग जान चाहे निर्धारण मर्न कसरी छैन। तपाईं प्रभुको रूपमा उहाँलाई प्राप्त गरेका यदि निर्धारण कारक, के तपाईं येशू हौं भने छ।
क्रिसमस साँझ मा नर्वेजियन राजकुमारी मार्था-लुईस गरेको पूर्व-पति भन्ने समाचार आए Ari Behn आत्महत्या छ । उहाँले 47 वर्ष पुरानो थियो।
स्वीडिश अभिनेता Mikael Persbrandt इन्स्टाग्राम मा लेख्छन् :
RIP। Karekare Ari, मेरो साथी, हामी बाहिर सँगै ट्रनहैम मा अक्टोबर मा सेट। तपाईं अब म यो अन्धकार तपाईं लिए भनेर बुझ्न यो मलाई त दुख्छ, तपाईं भित्र उज्यालो, प्राचीन आत्मा एक दुर्लभ गर्मी लगाउँथे। म आफ्नो बच्चाहरु र आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना, तपाईं को लागि प्रार्थना। शान्ति तपाईं भाइ। ♥ ️
धेरै दुःखी घटना र फेरि म त्यहाँ त साह्रै तिनीहरूले कुनै तरिका बाहिर हेर्न भनेर नराम्रो लाग्छ मानिसहरू हुन् कि सम्झना गरिनेछ। तसर्थ, हामी मानिसहरू उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्छन् र सुरक्षित हुन भनेर येशूको बारेमा सुन्न अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ।
म बारेमा Ari Behn सुरक्षित थियो थाहा छैन, तर म येशू मानिसहरूको मात्र आशा हो भनेर थाह छ। के तपाईं येशू छ भने, जब विभिन्न घटनाहरू अस्तित्व द्वारा मारा र तपाईं जान येशूले छ। उहाँले निको, मद्दत र सान्त्वना चाहन्छ।
Mikael Persbrandt लेख्छन्: "अब, म अन्धकार तपाईं लिए कि, यो मलाई त दुख्छ बुझ्छु।" यो येशूले मानिसहरूलाई बाट सुरक्षित हुनेछ यो अन्धकार छ। हाम्रो सँगी मानिस, येशू ख्रीष्ट दिन गरौं।
तपाईं आत्महत्या प्रतिबद्ध यदि तपाईं स्वर्ग प्राप्त?
तपाईं आत्महत्या प्रतिबद्ध यदि तपाईं स्वर्ग प्राप्त? त्यहाँ यस संग समस्या केही मानिसहरू हुन्। प्रियजनहरूलाई आत्महत्या गरेको हुन सक्छ, र तिनीहरूले स्वर्गमा जानुभएको छ भने तपाईं सोच्नुहोला।
म पहिले धेरै महत्त्वपूर्ण सत्य मा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ: यो तपाईं हामी स्वर्ग जान चाहे निर्धारण मर्न कसरी छैन। तपाईं प्रभुको रूपमा उहाँलाई प्राप्त गरेका यदि निर्धारण कारक, के तपाईं येशू हौं भने छ।
प्रमोदवनमा ठाउँ ग्यारेन्टी?
त्यहाँ जो लाग्छ केही छन् कि यदि एक हावा र बम बेल्ट मा blows आफूलाई र तपाईंलाई प्रमोदवनमा एक प्रत्याभूति स्थान छ। होइन, यसलाई होइन। तपाईं स्वर्गमा एक प्रत्याभूति ठाउँ हुनुपर्छ भने, त्यसपछि तपाईं आफ्नो प्रभु येशू प्राप्त हुनुपर्छ। अन्यथा, तपाईं स्वर्गमा जान हुनेछ।
यो तपाईं एक विशेष तरिकामा मर्न यदि स्वर्ग जान भनेर होइन। न त अर्को विशेष तरिकामा मर्न भने नरक जान भनेर यो छ। होइन, के तपाईं येशू वा छैन भने तपाईं स्वर्गमा नरक वा जाने कि निर्धारण के छ।
तर यो यो त तपाईं स्वर्ग प्राप्त आत्महत्या प्रतिबद्ध मात्र हो भनेर होइन। बिल्कुल छैन। भगवान तपाईं आफैलाई चोट चाहनुहुन्छ छैन। परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईं को लागि योजना छ।
त्यहाँ प्रेरित मा एक प्रसिद्ध ठाँउ हो। पावल र सिलासलाई झ्यालखानामा हालियो गरिएको छ। साँझ तिनीहरूले कैदीहरूलाई सुनिरहेको बेला भजनहरू गाउँछन्। त्यसपछि त्यहाँ एउटा भूकम्प हुनेछ, बंधन गिर, र झ्यालखानाको ढोका खुलेको छ।
को जेलर डर र आफ्नो तरवार आफ्नो जीवन लिएर सोच छ। त्यसपछि पावलले बाहिर रुन्छिन्: के आफैलाई, छैन चोट हामी सबै यहाँ को लागि। त्यसपछि जेलर भन्नुभयो: म बचत गर्न के गर्नुपर्छ? पावलले जवाफ: प्रभु येशूमा विश्वास र आफ्नो घर सुरक्षित साथ हुनेछ।
परमेश्वरले तपाईंलाई सुरक्षित हुन चाहन्छ
भगवान त्यसैले कि तपाईं आत्महत्या प्रतिबद्ध हुनुपर्छ छैन। उहाँले तपाईं सुरक्षित हुन चाहन्छ। र यो केवल येशू ख्रीष्टमा विश्वास मार्फत छ। तपाईंले अहिलेसम्म येशूले अप गरिएका छन् भने र उहाँलाई स्वीकार, तपाईं यसलाई के गर्नुपर्छ।
चर्को, आफ्नो मुखले येशू र स्वीकार प्राप्त खाली उहाँले प्रभु हो भनी र परमेश्वरले उहाँलाई मृत्युबाट बिउँताउनुभयो भनेर आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छन्। त्यसपछि तपाईं सुरक्षित र बचत हुनेछ। तपाईंका सबै पापहरू क्षमा गरिएका छन्। तपाईं परमेश्वरको सन्तान हुन्छन्।